Gudoomiyaha G/Banaadir oo ka qeyb galay munaasabad xariga loo jarayay machad cusub oo ka shaqeeya cilmi baarista dalkeena – idalenews.com
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kaqeyb galay munaasabad lagu furayay Machad cusub oo ka shaqeeya cilmi baarista wadankeena.
Machadkan Cilmi baarista ee maanta looga dhawaaqay Muqdisho ee Heritage munaasibaddii xarigga looga jarayay waxaa ka qeyb galay xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir, safiirrada dalalka Soomaaliya safaaradaha ku leh, cilmi-baarayaal ka kala socday wadamada geeska Africa, siyaasiin, Culumo, iyo dad kale.
Cilmi-baarayaal iyo qubarro kale oo dalalka adduunka ka yimid, madaxa jaamacadaha dalka qeybihiiisa kala duwan ka jira ayaa khudbad ka jeediyey madasha, waxa ayna ifiyeen in Machadkan uu yahay kii ugu horeeyey ee Soomaaliya ay yeelayo, isla markaana ay ka faa’idi doonaan Soomaalida dhammaan, maadaa uu Daraaseynayo xalka uu ku jiro xalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” ayaa daaha ka roggay munaasibadda lagu furayay Machadka Heritage ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan Machadkan Cilmi-baarista, isagoo xusay in ay howsho ay qabto ay ka tala qaadan doonto Xukuumadda Soomaaliyeed, hay’adduna ay ku dadaasho sidi arrimaheeda ay uga miradhalin laheyd.
Xildhibaanad Caa’isha Cilmi oo ka mid ah Barlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamtay in muhiim ay tahay in la helo xarun heshiisiin ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku kala war qaataan, waxeyna u rajeysay in uu guulleyso Machadka Heritage.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha Machadka Cilmi-baarista Soomaaliya C/raxmaan |Ceynte ayaa sharaxaadka ka bixinayay u jeedada loo aas aasay Machadka iyo waxa uu doonayo in uu ka qabto dalka, isagoo farta ku fiiqay in hadafkooda in uu yahay sidii Soomaaliya ay ugu dameyn lahaayeen Darraaseyn caalami ah oo hadda qeyb ka mid ah ay billaabeen.
Machadkan oo noociisa uu yahay kii ugu horreeyay ee laga hirgaliyo Soomaaliya xaruntiisuna ay tahay caasimadda ayaa lagu falanqeyn doona sida lagu soo bandhigayo munaasibadda hadba marxaladda uu dalka iminka marayo.
Ciidamada dowladda oo saaka Howl gal ku qaaday xaafado ka tirsan degmada Wadajir